Hamehana ara-pahasalamana vaovao :: Mihamiverina tanteraka ny fiainana andavanandro • AoRaha
Hamehana ara-pahasalamana vaovao Mihamiverina tanteraka ny fiainana andavanandro
Nanambara ny fivahan’ny fihibohana ho an’ireo faritra rehetra manerana an’i Madagasikara, ankoatra an’ireo distrika efatra (Toamasina I sy II, Fenoarivo Atsinanana ary Moramanga) sy ny faritra Analamanga, ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, omaly alina. Ny filazany fa « voafehy ny fiparitahan’ny valanaretina raha oharina amin’ireo firenena hafa » no nahatonga izao fepetra vaovao izao.
« Azo lazaina fa voafehy ny ady amin’ny valanaretina na mitombo aza ny olona mitondra ny tsimok’aretina raha oharina amin’ny firenenkafa », hoy ny Filoha. Isan’ireo nalainy ohatra i Brezila sy Etazonia ary Afrika Atsimo. « Mila mailo hatrany. Mila miray hina ary manaraka ny toromarika rehetra tsy hiparitahan’ny valanaretina », hoy hatrany izy.
Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana ihany anefa i Madagasikara, nanomboka tamin’ny sabotsy 13 jona lasa teo ary haharitra dimy ambin’ny folo andro indray, araka ny tapaky ny Filankevitry ny minisitra. Samy hanana ny fepetra hampiharina avokoa ireo distrika efatra sy ny faritra Analamanga, saingy miato foana aloha ny fitaterana nasionaly sy rezionaly. « Angatahina ny mpitatitra mba hiaritra kely », hoy izy.
Fivezivezena amin’ny alina
Ao anatin’ireo fepetra vaovao ny fiverenana tanteraka amin’ny fiainana andavanandro ho an’ireo faritra rehetra, ankoatra ireo distrika efatra sy ny faritra Analamanga. Voarara hatrany kosa ny famoriana olona mihoatra ny dimampolo. Mikatona hatrany koa ireo toerampilanonana. Nofoanana ny tsy fahafahana mivezivezy amin’ny alina amin’ireo faritra ireo, raha amin’ny 10 ora alina hatramin’ny 4 maraina ho an’ireo hafa.
Miverina miasa avokoa ny rehetra eto Analamanga hatramin’ny 5 ora hariva afatsy ireo olona marefo (taizan’ aretin’ny tosi-dra sy ny aretin’ny voa, diabetika ary ny sohika). Mitohy hatramin’ny 7 ora hariva kosa ny fitateram-bahoaka ary tsy mbola mianatra ny mpianatra. Nanamafy kosa anefa ny Filoha fa: « hisy ny fanadinampanjakana fa tsy ho taona fotsy ity taom-pianarana ity ».
Hifarana amin’ny 3 ora tolakandro indray ny asa ho an’ireo distrika efatra (Toamasina I sy II, Fenoarivo Atsinanana ary Moramanga) izay voakasiky ny valanaretina.
Fakana an-keriny :: Maty voatifitra Ra-Jim naman’i Lamà
Krizy ara-toekarena :: Maherin’ny arivo ireo orinasa nikatona